Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Uninzi kunye nexabiso eliphantsi lokuya e-US
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Kunye nezithintelo zohambo ezisaguqukayo ngokupheleleyo, abantu abaninzi baseMelika kunangaphambili bakhetha iholide kufutshane nasekhaya.
Isifundo sijonge kwezona zixeko zikhulu zase-US zokufumana uninzi kunye neendawo ezingabizi kakhulu zokuhamba.
IsiXeko sase-Oklahoma yeyona ndawo ifikelelekayo kwikhefu lesixeko sase-US.
IsiXeko saseNew York yeyona ndawo ibiza kakhulu eMelika.
Kunye nezithintelo zokuhamba ezithetha abantu abaninzi baseMelika kunanini na ngaphambili bekhetha ukuya eholideyini kufutshane nasekhaya, iingcali zohambo ziveze eyona ndawo ifikelelekayo nexabisa kakhulu yokuya e-US ukukhuthaza uhambo lwakho olulandelayo!
Uphononongo lujonge ezona zixeko zikhulu kweli lizwe ukufumanisa ukuba zeziphi ezifikelelekayo, ngokusekwe kwizinto ezinje ngokutya nesiselo, iindleko zehotele kunye nezothutho.
Iindawo ezili-10 eziphezulu ezifikelelekayo e-US
Uhlu isixeko Ibhiya Isiselo somdiliya Isidlo sangokuhlwa Iiteksi (1km yokuhamba) Ndlela-nye itikiti lothutho lwasekhaya Ixabiso lehotele ebusuku (impelaveki) Amanqaku okufikelela ngokufikelela kwiholide / 10
1 I-Oklahoma City, eKorea $3.00 $12.00 $11.50 $1.65 $2.00 $106 8.58
2 I-Indianapolis, eIndiana $3.50 $10.97 $15.00 $1.24 $1.75 $179 8.00
3 ETucson, eArizona $4.00 $12.00 $14.00 $1.37 $1.75 $134 7.96
7 Fort Worth, eTexas $3.00 $12.00 $15.00 $1.12 $2.50 $145 7.70
8 ELouisville, eKentucky $5.50 $10.00 $15.00 $1.43 $1.75 $162 7.67
9 IOrlando, iFloria $4.00 $11.00 $15.00 $1.49 $2.00 $160 7.65
Uphononongo lufumanise ukuba i-Oklahoma City yeyona ndawo ifikelelekayo US Ukuqhekeka kwesixeko. Isixeko sasinexabiso eliphantsi kwisiqingatha sezinto ezihlalutyiweyo, zibiza nje iidola ezi-3 ibhiya, i-11.50 yeedola kwisidlo kwivenkile yokutyela, kunye nee-106 zeedola ebusuku ehotele! Ukuba unomdla kwi-Old West, ke iSixeko sase-Oklahoma kukundwendwela, apho ungandwendwela khona iMyuziyam yeSizwe yeCowboy kunye neLifa leMveli leLifa leMveli, zama isandla sakho ekubambeni nasekufuyeni iinkomo nasekukhweleni amahashe kwifama, okanye uthathe indawo rodeo!
I-Indianapolis sesinye isixeko esinexabiso eliphantsi kakhulu ukutyelela, ukubekwa kwindawo yesibini. Ezothutho zinexabiso eliphantsi, kunye netikiti lokuya kuphela kuthutho lwasekhaya lixabisa nje i-1.75, kunye ne-1km yokuhamba ngeteksi eyi-1.24. Kulandelwa iTuscon, ukhetho oluthandwayo kwabo banqwenela ukutyelela iSaguaro National Park kunye nesona sixeko sitshiphu kutyelela!
Iindawo ezi-5 eziphezulu kakhulu ezibiza kakhulu e-US
1 IsiXeko saseNew York, eNew York $7.81 $15.00 $20.00 $1.86 $2.75 $309 2.56
2 ESan Francisco, eCalifornia $7.50 $15.00 $20.00 $1.86 $3.00 $231 3.07
3 IBoston, iMassachussetts $7.00 $15.00 $20.00 $1.86 $2.63 $273 3.16
4 EBrooklyn, eNew York $7.00 $15.00 $17.00 $1.55 $2.75 $280 3.76
Njengenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi, hayi e-US kuphela kodwa kwihlabathi, ayothusi into yokubona oko City New York ikwayindawo yeholide ebiza kakhulu e-US, ngelixa iBrooklyn engummelwane ikwindawo yesi-4. I-NYC yayisesona sixeko sibiza kakhulu kwiimethrikhi ezine kwezintandathu ezijongiweyo: ibhiya ($ 7.81), ibhotile yewayini ($ 15), isidlo sokutya ($ 20), kunye nokuhlala ehotele ($ 309 ngobusuku).
Esinye isixeko esithandwayo kakhulu sithatha indawo yesibini, iSan Francisco ifana neNew York xa kufikwa kumaxabiso athile kwaye ingekude kakhulu kuninzi lwabanye. Kanye njengendawo ethandwa kakhulu ngenxa yeempawu zayo kunye nolwakhiwo, isixeko sesinye sezona ziphezulu zifumana umvuzo e-US, ekwaqhuba amaxabiso anyukela kwiindwendwe.